Shir Xaasaasiya Guddiyada Beelaha Garxajis iyo Habarjeclo. | Hargeysa World~Herald
Shir Xaasaasiya Guddiyada Beelaha Garxajis iyo Habarjeclo.
UncategorizedShir Xaasaasiya Guddiyada Beelaha Garxajis iyo Habarjeclo.
Isniin, (Hargeysa, 20-12-2021)-Guddiyada Beelaha Garxajis iyo Habarjeclo ayaa shir uga furmay Magaalaa Margeysa. Labadan guddi ayaa ka gaabsaday in ay saxaafadda la hadlaan. Waxaanay waa galeen shirar albaabadu u xidhanyihiin oo saxaafaddu dibad joog ka ahayd.
Qaar kamid ah odayaasha oo si hoose u la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in labadan guddi ka wada hadlayan xaaladda siyaasadeed ee dalka, abaaraha ka jira deegaaanaa labada beelood degaan iyo arrimaha doorashooyinka inagu soo fool leh.
labadan guddii ayaa dhowaanahan xagga siyaasadda isku soo dhowaanayey. Guddida garxjis ayaa u ololaynaya sidii sanadkan loo taageeri lahaa in ay wadanka madaxweyne ka noqdaan. Musharrax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirrona loo soo saari lahaa. Waxaanay kulamo badan la galeen odayaasha habar jeclo, laakiin kulankani waa kulankii ugu ballaadhnaa oo odayaal guddiya oo ka kale socda Garxajis iyo Hbarjeclo dhex mara.
Madaxweynaha Qaranka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna dhinaciisa kulamo la yeeshay odayaal iyo ergooyin ka socda beelaha Habarjeclo iyo Habaryoonis isaga oo todobaadkii hore si gooni-gooni ah kula shiray madaxtooyada.
sida wararka hoose ee aan kulamadaas ka helnay sheegayaan madaxweynuhu taageero buuran iyo garab istaag siyaasadeed oo uu ku qanco kale muu kulmin odayaashaas.
Hasayeeshee, labadan guddi Habar jeclo iyo Graxajis ee shirka hose uga socdo magaalda weli lama haayo ajandayaaasha saxda ah ee laga wada hadlaayo. marka kulankani soo dhammaana guddiyaduw axay si toosa ula hadli doonaan saxaafadda.